Thursday March 14, 2019 - 10:35:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xilli ciidamada maamulka isku magacaabay Somaliland ay iskusii fidinayaan deegaanno dhowr ah oo katirsan gobolka Sanaag ayuu iscasilaad ku dhawaaqay mas'uul katirsanaa maamulka isku sheega Puntland ee kajira gobollada waqooyi Bari Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamada maamulka 'Somaliland' ay qabsadeen dhowr deegaan oo loo tirin jiray in uu ka taliyo maamulka Puntland.
Saacado kadib ayuu taliyihii ciidamada Daraawiishta maamulka Puntland warqadda iscasilaadda ugudbiyay Saciid Cabudllaahi Deni, ilo wareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha ciidamada maamulka Garowe ay isku maandhaafsanyihiin qaabka loo wajahayo xaaladda soo korortay.
Dhinaca Col.Saciid Cali Jaamac Caarre ayaa magaalada Garowe uga dhawaaqay in uu weeraro ku qaadi doono magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Saaag.
"Waqti aan dheerayn xabaddu waxay ka bilaaban doontaa magaalada Ceerigaabo waxaa naga go'an in aan Somaliland ka xureynno dhulka ay Puntland ka qabsatay" ayuu yiri Col. Caarre.
Labadan maamul oo xiriir laleh xabashida Itoobiya ayaa sanadadii lasoo dhaafay ku loolamayay deegaanka Tukarraq ee kaabiga ku haya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaana muuqata in colaadda udhaxaysa ay ku faaftay gobolka Sanaag.